ukwesekwa Technical emnothweni umlimi yesimanje Ngokuqinisekile lokho kuhlanganisa amathuluzi ukusebenza ezweni. Ngenxa yale njongo, balimi, tillers, okuyinto, kuye ngokuthi model, ongenza imisebenzi ku tillage, ahlelembe, ilungiswe ukhula nezinye imisebenzi. Njengoba umzimba usebenza zedivayisi ngokomthetho aphansi, ukuze handyman onekhono, ngeke kube nzima ukwenza leli thuluzi ngesandla. Njengomthetho, abalimi abangama okuzenzela akuzona njengoba ngempumelelo njengoba nozakwabo kwemboni, kodwa kubalulekile ukubala kanjani ukuyifaka kwi ugandaganda uhambo-ngemuva noma ugandaganda. Nokho, namuhla onobuhle ezivamile futhi mathupha, ukusebenza kwe-okuyinto akudingi uxhumano nezinye izinto zokusebenza.
ulwazi olujwayelekile mayelana unguMlimi
Umqondo "kubalimi" abantu abaningi sizihlanganise nabantu tractor compact kanye motor amabhlogo kokwenza phansi handling imisebenzi. Yize kunjalo, uma kokubuka shí amagama, kuba sobala ukuthi ungumlimi - kumane nje kuyingxenye yomthwalo izindlela lobuchwepheshe, ngqo ohilelekile ekwelashweni. Kuye ukusebenza isakhi kubalimi okuzenzela angafeza eziningi imisebenzi ukusebenza. Abakwazi ukwahlukahlukana ekucubungululeni amakhono futhi lihambisana impahla eyengeziwe. Ngaphambi kokuqhubeka womshini izikhali ezinjalo, Kumele bahlole ubunjalo bomsebenzi kanye nesidingo ixhume ugandaganda noma ezinye imishini.
Hand ungumlimi ngezandla
Le nguqulo olula womshini ungumlimi ekhaya. Lokhu izici ezincane design okuzokwenza eyokwazi uthwebule komkhawulokudonsa 20 cm. Ngesisekelo idivaysi yakho ngeke isibambo tube lensimbi ububanzi 2.4 cm. Ubude element ikhethwa ngqo ukuphakama yomsebenzisi. On phansi tube kumele afakwe kusukela okuqinile wood-eksisi. Ukuze wakhe futhi ezizofakwa ukucutshungulwa emizimbeni. Naphezu inkimbinkimbi umklamo, ngezandla isandla abalimi kungenzeka kulekelelwa amasondo. Bangakwazi elaqheshulwa uthayela ka 0.3 cm ukushuba futhi fixed kanye namantongomane.
Kunenye samuntu sicabangela phansi isiqeshana metal springy. Kulokhu kwemigomo workpiece kumele kube kanje: obuphelele - 5 cm, ububanzi - 2 cm, ukujiya - mayelana 2 mm. Le ngxenye is abethela isiphatho sesigodo, lapho ukucubungula oyokwenziwa. Tape echayeke emphethweni, ngakho-ke kungaba benziwa iluphu, bese ukwenza refacing zamazwe amabili emaphethelweni nge ifayela. Ububanzi iluphu kungenzeka iyiphi ipharamitha ukuthi ibalwa kusukela endaweni engadini.
Rotary disc ungumlimi
Lona umshini ukuba ungaguli kakhulu, lapho ufuna ukwenza, futhi ziba ngcono futhi ahlelembe inhlabathi futhi hilling. Ngo nomklamo walo, ungumlimi okuzenzela Ridger kusikisela ukuthi izinto ezilandelayo: ukushayela oluvala amasondo shaft futhi bushing, iziqeshana ezinkulu noma ezincane, ngepeni nogwali. Imisebenzi ezisebenza izingxenye enze akwazi ukugcina ashiselwe ukuze emkhonweni. Lesi sakamuva, esikhundleni salokho, ibekwe ku-eksisi ngumsebenzi. ekupheleni Axial kuvikelwe ku kubakaki nge Cotter pin. Ngo ubakaki esikhulu anemifantu ekhethekile efakwe ipayipi ngogodo futhi isibambo. Ngezinye ubakaki aphansi ukukhwezwa (by Welding) induku ubude 25 cm kanye ububanzi of 2.4 cm.
Futhi induku screwed induku 1.6 cm ukushuba, okuyinto kufanele luhlanganise kancane ngenhla oluvundlile. Inkinga enzima ekwenzeni lokhu imodeli - ke spheronization oshayelayo. Ngokuvamile, lena Umbuzo ovamile phakathi balimi abanesithakazelo indlela yokwenza umlimi okuzenzela okuthembekile umsebenzi izinto. Ngaphandle imishini ekhethekile, indlela babe munye kuphela - ukushintsha ukuma disc ngesando, ukwakha isitsha phakathi nendawo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukubala bese ushayela eyindilinga ukukhiya engela maqondana isiqondiso umshini. Lokhu ipharamitha kufanele kushintshwe usebenzisa thumbscrews efakwe bar.
Lolu hlobo kubalimi ngokurhaba ubuye efanelekayo imisebenzi emikhulu. Ngamandla ayo idivayisi akukuniki indlela kwezinye izinguqulo tractor ezihlangene. Ngaphezu kwalokho, ibona ingabiza okuzenzela ungumlimi tillers, ukuhlinzeka emalungeni okuhambisanayo isakhiwo. Kodwa ikhambi elingcono - iyunithi ngomshini ngokugcwele injini Chainsaw.
Ngesisekelo uzokwenza Uhlaka cubic, ashiselwe kusukela emakhoneni. Sokuphehla amandla esisogwini emakhoneni transverse esifundeni engenhla izindlu. Uphethiloli lingasethwa ngisho esiphansi kanye kubakaki. Ngaphambili edeskini bazocula Uhlaka usekelo phakathi kushaft. Ukuze ulungise ukumiswa strut eziveza design Kumele uxhumeke amalungu longitudinal. Umphumela self-wenza uhambo-ngemuva, kabani maphakathi gravity kuyoba phezu ngenhloso ngaphandle wheelbase. Njengoba amasondo ingasetshenziswa roller rubberized futhi basingathe eyenziwe ipayipi.
Kulokhu, amandla iyunithi is lathathwa grinder, kodwa ngenye indlela umqondo uhlala okufanayo. Uzimele kuyiphi inethiwekhi kubalimi okuzenzela ugandaganda noma uhamba ugandaganda, ungase futhi laba isisekelo segama kuyikhono ezizimele. Isici yalesi design yikhono egqekeza okusheshayo inhlabathi izingqimba ku izigaxa ezinkulu. Uma kuthiwa usebenza ngesivinini ongaphakeme ke ukucutshungulwa izonikeza ikhava obucayi okuxekethile.
Carter ethatha grinder igiya kudingekile ukushisela engeli amabili. Futhi efakwe amapayipi ezimbili ukuphela ukuthi ibe-pre-izimisele - ngokuzayo uyozisingatha. isondo enama-asi nazo ogibele kumila emakhoneni. Isilinganiso amasondo ezinkulu ungakhethi, ngoba phakathi kwenqubo, bakhulule enkingeni owengeziwe. Kanti lincane engathandeki, njengoba kujule inhlabathi. Ngakho, inguqulo elikhulu -. Isilinganiso isondo ubukhulu 20 cm kusukela obandayo kushaft Scrap kumele sizakhele. Nge ezinkulu sledge isando noma kunesidingo ukuqhekeza grinder umlomo wombhobho, okuyinto kuzosusa bushing, okuyinto thatha design shaft ne Lug isikulufa.
Motofreza izandla siqu
Lolu Phiko luqondene esiphambanweni phakathi imodeli mathupha futhi ephelele motor-block. Uma ufuna ukuthola okuzenzela ungumlimi umsiki okuyinto lucwaningo ukucutshungulwa ngaphandle third-party drive, le ndlela kuzokwenza kube best. Ngasiphi efanelekayo ukufakwa isikhundla injini nge umthamo ukusebenza cm3 50. Imisebenzi umsiki kungenziwa wawugxilisa isakhiwo wabuthela kusuka yensimbi ngezimiso 0.5 x 4 cm. 8 kudingeka izakhi umsiki oyedwa. Ngokulandelayo, emapheshana kuye kudingeke ukuba banikeze ukuma incwadi G, futhi uhlanganyele nabo ndawonye maphakathi amabhawudo ukuze kwakumiswa iziphambano ezine.
Inkampani yenethiwekhi isisekelo ibhokisi lensimbi, nakho kufanele ibekwe Ukwehla igiya. Ukwakha uhlaka enjalo kungaba amapuleti obukhulu 0.4 cm kanye housings izithelo. Ukuze udlulisele kushaft Lesisemkhatsini phezulu ezakhiwe ibhokisi kufanele kwenziwe izimbobo ezimbili. Umphini sizophenduka e amabombo amabili aboshelwe plate amabili ashiselwe ka ezivalekile. Ukuze ulungise izinhlinzeko zoMthetho kubalimi okuzenzela umklamo enjalo bephethe izinduku kochungechunge. Bangakwazi ashiselwe phansi amapuleti.
Iyunithi has a ukwakhiwa elula futhi ayidingi ukuqondanisa nezinye amasu, kodwa linikeza imiphumela emihle endleleni umhlaba. Okuphuma kuyinto imishini Lancet imilenze ekusebenta lasihlanu. Design isisekelo ifomu Uhlaka koromysloobraznaya, futhi eyenziwe izingxenye steel. It isethwe Paws ploskorezhuschie uhlobo Lancet. izici eziningana ezinjengolwazi Mark kungenziwa prefabricated e motoblock CPN-4A. Lungisa yezingxenye ahlabayo ayadingeka ukuze omunye phakathi futhi imilenze emibili yangaphandle isifakiwe ngendlela uvalo. Inqwaba kumele unikeze uhlaka ensikeni ku iziphethu. Elilinganiswayo ububanzi ukucutshungulwa imilenze enjalo 33 cm.
Disc Harrow ukulima
Disc Harrow kungenziwa zakhiwa akwazi ukugcina ibhethri 8 kwakhiwa ezithinta ukuma eyindilinga. Ngokusho uhlobo lomsebenzi kuyoba ngumsebenzi self-ezenziwe sokuhamba ugandaganda, ububanzi emkhatsini wetincenye teluhlaka ahlabayo lapho inani ku-15 cm. Nge luhlaka kuwuthinta Harrow lomnyango isimiso. lezisekelo lingafika ku 130-140 cm ububanzi -. 65 cm Kulokhu, amagumbi Uhlaka Kusetshenziswa ingxenye 45 x 45 cm ukujula nesenzakalo inhlabathi -. 10 cm ububanzi eseduze - cm 120 Izinzuzo Harrow ezinjalo. futhi kumele ifake phakathi kungenzeka ukulungisa engela - degrees 17.
Omunye izixazululo engcono womshini imishini elisizayo tractor kuyoba igeja owodwa hulled. Ingasetshenziselwa alime kusukela amahektha ngehora 0.12 ukuze 0.2. Ukujula zokusebenza ngenkathi encane - cm 22 kuphela ububanzi 35 cm ekhiqizwa abalimi okuzenzela microtractor base efulemini yensimbi .. Igeja zingenziwa iziteshi, futhi umzimba ukuboleka i-trailer imishini ukukhwezwa ezifana amageja, kodwa ngensingo emifushane.
izixazululo Bezakhiwe sokuthuthukiswa eziningi balimi, kukhethwa Ngokuzayo kunqunywa okufunwa umsebenzisi. Izindleko impahla womshini amathuluzi ukusebenza ezweni incane khona, futhi naphezu kweqiniso lokuthi nozakwabo ifektri ngokuvamile balinganiselwa ku amashumi ezinkulungwane ruble. Lokhu ngokwengxenye enkulu ngenxa yokuthi abalimi okuzenzela ngokwethukela kusetshenziswa kakhulu, hhayi nje kuphela emakhaya, kodwa futhi izinhlangano ukulima lochwepheshe. Ukuthembeka sha they are amayunithi kancane ngingelutho futhi izinga phansi ukuphatha ukuze akwazi ukwenza ezibukwayo. Ukukhiqizwa ungumlimi ngezandla zabo kuzo Scrap can metal izikhala, kodwa inzuzo enkulu amadivayisi ezifana ezihlukahlukene imiklamo namakhono njengoba kudingeka enze ushintsho lobuchwepheshe ngaphandle kosizo ochwepheshe.
Indlela yokwenza umdlalo wakho siqu
Zokushisela etafuleni nge yakhe izandla: izithombe, imidwebo
Amandla amancane: okuzenzela umoya generator
Corner iKhabhinethi ngezandla zakhe: izimfihlo, amathiphu, imidvwebo, inhlangano izinyathelo. Indlela yokwenza iKhabhinethi ekhoneni ngezandla zakhe?
Ukutheleleka kwe-Staphylococcal. Ingozi Noma Cha?
UBrad Richards - inkanyezi ye-NHL
Burrito nge inkukhu: iresiphi for izitsha Mexican
Iziphetho eziphathekayo zika-2013
Amathoyizi zokufundisa usana olunezinyanga-9 ubudala: uhlu izici kanye nezincomo